ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းဂျော့ဘ် Apply မှကုမ်ပဏီမြား၏အပြီးအစီးစာရင်း🥇
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းဂျော့ဘ် အတန်းထဲတွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆော်ဒီအကြီးတန်းအမှုဆောင်များသည်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးမန်နေဂျာများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်း၏အရိပ်တွင်သင်သည်ဆော်ဒီအာရေဗျကိုလည်းစဉ်းစားသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဆော်ဒီအာရေဗျတွင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာဆောင်းပါးများကိုရေးသားခဲ့သည် ကျနော်တို့နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အနည်းငယ်အပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူထွက်အလုပ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေကြသည် ဘယ်လိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျနော်တို့က၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ အလုပ်တစ်ခု site ကိုအကွံဉာဏျ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်အကောင်းဆုံး.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့အာရပ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ တည်ရှိသော အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးနေရာ။ အာရေဗျကျွန်းဆွယ်၏အများဆုံးထွက်သည်အလုပ်လုပ်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံက။ ဆော်ဒီအာရေဗျ 830,000m ၏ဧရိယာစီမံခန့်ခွဲခြင်း2။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဆော်ဒီနိုင်ငံကအာရှအတွက်ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အမှတ်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည် တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်လည်းဒီတိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်ရှာတွေ့.
သူတို့အခွအေနမြေိုး, ဤအရပ်ဌာနကိုကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ဖြစ်၏။ ထိုသို့ဒုတိယအကြီးဆုံးအာရပ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံစကားပြော။ 35 သန်းဖြစ်ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေရှိပြီး ?. သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်ရေရှည်မှာဒါ။ သငျသညျရှိနေတဲ့အလုပ်ကိုရှာဖွေကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ ဒါ့အပြင်အတော်လေးစမတ်စိတ်ကူးကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များပူးပေါင်း။ သင်သည်အခြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူအများအပြားဖိတ်ကြားချက်ကိုလင့်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
foreground ကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကကမ်ဘာပျေါတှငျ 40th အကြီးဆုံးတိုင်းပြည်အောင်။ တစ်ဦးလည်းမရှိလူဦးရေအပေါ်အခြေခံပြီးကပ်လျက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်နေရာကောင်း။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းရေနံအလုပ်အကိုင်များအများစုရေနံကုမ္ပဏီများကနေလာပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားရဲ့များအတွက်နောက်ထပ်အဓိကသော့ချက်အချက်။ မူလတန်းအလုပ်လုပ်နှင့်လူနေမှုအုပ်စုတစ်စု Arabic အဘိဓါန်ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်သင်တန်း၏, အဓိကဘာသာတရားအစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ထဲ၌ဤက The ဆော်ဒီအစိုးရနှင့်အတူ တစ်ဦး 100% အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါကအနုတ်ဘက်မှာကအကြွင်းမဲ့အာဏာဘုရင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှငျဘုရငျနှငျ့အတူဦးရစ်သရဖူမင်းသားနှင့်အတူဒါ့အပြင်ဒုတိယပန်းဦးရစ်သရဖူကိုမင်းသားနှင့်အတူ။ ပိုက်ဆံမှအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူငွေကြေးတစ် Riyal ဖြစ်ပါတယ်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်မေတ္တာနှင့်သရုပ်ဖော်ပုံအဖြစ်။ မရှိသောဘုရားဖြစ်ပေမယ့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ Messenger ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျအလံအစိမ်းနဲ့အဖြူ၏အရောင်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဒါကြောင့်ဤအရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်အကောင်းဆုံး.
AA ကို Turki Group မှ
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ဒီကုမ္ပဏီလေ့ ATCO အဖြစ်လူသိများသည်။ ကုမ္ပဏီ ATCO အလွန်စနစ်တကျနှင့်ဖြစ်ပါသည် ကျွမ်းကျင်သူများ Oriental စီးပွားရေးအုပ်စု။ ဥပမာ, ကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာရေဗျ Dammam အခြေစိုက်။
Atco the1950s ကတည်းက operating ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကုမ္ပဏီအလုပ်ရရန်ထိုက်တန်ကြောင်းအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားရိုးရှင်းပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလုံးလုံး Abdulrahman အလီအယ်လ် Turki ကပိုင်ဆိုင်သည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူအဖြစ်သင်တို့အဘို့အပြုသဘောဘက်ခြမ်းတွင်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ATCO အုပ်စုတစ်စုနှစ်ဆယ်သုံးယောက်ရှိပါတယ် ကိုယ့်ဆော်ဒီအာရေဗျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွဲပြားခြားနားကွဲပြားမှု။ ကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲသည်ကိုထိုအခါသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဖက်စပ်နှင့်ကို standalone အပေါ် operated ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ.
အတိုချုပ်အားဖြင့် AA Turki Group ၏လှုပ်ရှားမှုများသည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ sectors များစွာအတွက်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ကုမ္ပဏီကောင်းသောနေရာများအတွက်အလုပ်သမားတွေရတဲ့။ အကျဉ်းချုပ်ကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး၌တည်၏ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဆော်ဒီကုမ္ပဏီမှလက်လီရောင်းချသောနှင့်အိုင်တီ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည်ဂိမ်းတစ်ခုအနိုင်ရရှိရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အခါအားလျော်စွာ သငျသညျဘလော့ဂ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရနိုင်.
ATCO 23 ကွဲပြားမှု, ဖက်စပ်နှင့် stand-alone ကုမ္ပဏီများမှပါဝင်သည်။ အဆိုပါအုပ်စုသည်ကမ်းလှမ်းမှု ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကျယ်ပြန့်။ အောက်ပါဟာအကောင်းဆုံးများထဲမှအပါအဝင်:
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး & ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု
တယ်လီကွန်းထုတ်ကုန်များ & န်ဆောင်မှုများ
အလိုအလျောက် & ထိန်းချုပ်ရေး
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ထရေးဒင်း & န်ဆောင်မှုများ
ဆိပ်ကမ်းစီမံခန့်ခွဲရေး & အဏ္ဏဝါန်ဆောင်မှုများ
အင်ဂျင်နီယာ & စာခြုပျ
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်ကုန်များ & န်ဆောင်မှုများ
ကုမ္ပဏီများ၏ Abdulla Fouad Group မှ
အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအများဆုံးဂုဏျအောင်မြင်မှုပုံပြင်များဖြစ်ပါတယ်။ Abdulla Fouad အဖွဲ့ (AFG) Ras Tanura, ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်း 1947s ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. ဒါဤမျှလောက်တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူမပေါက်ပါဘူး။ ကျိန်းသေတဲ့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် MBA ဘွဲ့ရရှိခြင်းရှိအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့.
ဤအချက်များကုမ္ပဏီစတင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာသေးငယ်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအဖြစ်ပေးတော်မူ၏။ ဒါပေမယ့်အတွက် တိုးတက်မှု၏နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီယနေ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင်ပိုမိုစုံလင်လာလှုပ်ရှားမှုများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း.
အဖြစ်ကောင်းစွာနက်ရှိုင်းသောသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအသိပညာနဲ့အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီအဖြစ်။ ၏သင်တန်းအတူတူအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတူ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းကြီးမားတဲ့ HR နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျစီးပွားဖြစ်ကုန်သွယ်ကဏ္ဍများရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် Abdulla Fouad ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစုစု။ အလယျပိုငျး eas အတွက်စူပါလူကြိုက်များဖြစ်လာt ကို။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ကုမ္ပဏီမျိုးစုံကုမ္ပဏီများနှင့်သင်းဖွဲ့ပါဝင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်သည်ကြောင်းပေါ်အခြေခံပြီး 2018 ၌ဤဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ၏ CV ကိုပေးပို့.
ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့အတွက်လုပ်သားများရှာဖွေနေကုမ္ပဏီ။ ထိုမှတပါး, စက်မှုနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ဖြစ်လာ။ အဆိုပါ AFG Group မှကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစားသုံးသူ & Real Estate များအတွက်စုဆောင်းဒါပေမယ့်လည်းမသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုလည်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာကဏ္ဍများတွင်စီမံခန့်ခွဲမှုအမှုဆောင်အရာရှိရှာဖွေနေ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဆော်ဒီအာရေဗျမှာထိပ်တန်း 100 ကုမ္ပဏီများမှကြားတွင်ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏နိုငျငံတျောတလျှောက်လုံးတကယ်တော့ AFG Group မှဝန်ဆောင်မှုနေရာများတွင်တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုမ္ပဏီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, ဥရောပနှင့်အာရှရှိဝယ်ယူရေးရုံးများ၏ကွန်ယက်ရှိပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းဂျော့ - Abulla Fouad ။
ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာရေဗျအတွက်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုအဖွဲ့အစည်းက။ ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကုမ္ပဏီ 1988 အတွက် operated စတင်ခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, AEC ကိုနည်းပညာအသစ်အတွက်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။ AECL အဆင့်မြင့်အီလက်ထရွန်းနစ်သုတေသနနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုထက်ပို အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကုမ္ပဏီ။ စိတ်ကိုကုမ္ပဏီ၌ဤဆော်ဒီအာရေဗျကာကွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍများတွင်များအတွက်စုဆောင်းအတူ။
သူတို့အခွအေနမြေိုး, AEC ကို၏ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒေသခံစွမ်းရည်နှင့်မဟာဗျူဟာဒေသများရှိစကားပြော။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းကုမ္ပဏီကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များကိုအသစ်တိုးတက်မှုကြရပြီ။ ဒါကကုမ္ပဏီ အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများငှားရမ်း။ ဒါကြောင့်သင်လျှင် အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများ သင်သည်သင်၏ CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ်။
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်တစ်ဦးကုမ္ပဏီထုတ်ကုန်ထောက်ခံမှုအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2006 ၌ဤအံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစိတ်ဝင်စားသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ Acer ကနှင့်အတူသစ်ကိုစာချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ AECL အရှေ့အလယ်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများကိုထုတ်လုပ်ဖြစ်လာသည်။ ထိုဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံလူဦးရေ PC များတတ်နိုင်စေရန်ဆော်ဒီအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဘို့အသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းဂျော့ - အဆင့်မြင့်အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီ။
အာမက်ဟာမက်အယ်လ် Gosaibi & ညီအစ်ကိုများ
ယနေ့သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့က join ။ အမှန်တကယ်, သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေလျှင်။ ALGOSAIBI & Bros AH ။ နှစ်ပေါင်းများစွာပြန်ဒါကဆော်ဒီအာရေဗျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှု။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဒီဆော်ဒီကုမ္ပဏီခြွင်းချက်စီမံခန့်ခွဲမှုလူတို့နှင့်အတူကစတင်ခဲ့သည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအဖွဲ့အစည်းကိုလိမ္မာပါးနပ်ပေးအခြားတစ်ဖက်တွင်, GCC နိုင်ငံများအဘို့အကျွမ်းကျင်မှု။ ထိုအသာလွန်စီမံကိန်းကို GCC client များသာမဟုတ်ဘဲသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်းဒူဘိုင်းစီးတီးတို့ပါဝင်သည်။
သင်တစ်ဦး Are တစ်ဦးကယောဘရှာဖွေနေကျွမ်းကျင်သူများ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်း ?. အာမက်ဟာမက်အယ်လ် Gosaibi & ညီအစ်ကိုတို့, အဖြစ်မှန်အတွက်, ဆော်ဒီအာရေဗျ၏နိုငျငံတျော၌သင်တို့ကိုအံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်သည်သင်၏ updated CV ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ နှင့်ဤအတူစိတ်တွင်, သင်တို့ရှိသမျှသည်စိန်ခေါ်မှုအခွင့်အလမ်းများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထောက်အပံ့များရှိသည်နိုင်.
အပေါ်တစ်ဦးအမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကအားမရကုမ္ပဏီ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းမည်သူတိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူ။ အာမက်ဟာမက်အယ်လ် Gosaibi & ညီအစ်ကိုများကုမ္ပဏီနှင့်အတူနောက်ထပ် key ကိုအမှတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျင့်ဝတ်များနှင့်တန်ဖိုးများဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီအတွင်းရှိအပြုသဘောဘက်တွင်, တစ်ဦးချင်းထူးချွန်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖှံ့ဖွိုးတိုးတ အာရဗီကမ်ဘာပျေါတှငျအရေးကွီးသညျ.
အဆိုပါကုမ္ပဏီအ GCC နိုင်ငံများန်းကျင်ဆုလာဘ်များနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုရှိပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ကုမ္ပဏီ ကျွမ်းကျင်သူများအမှုဆောင်အရာရှိအားမရ။ ဤရွေ့ကား, ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သင်ဆော်ဒီအာရေဗျစီးပွားရေးလောက၌သင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ကိုလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်ကုမ္ပဏီလုပ်သားများအဖွဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ပြီးလာမယ့်အဆင့်အထိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူပါ။
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏တက်ကြွစွာဖြစ်ပါသည် ထိပ်တန်းအခွက်တဆယ်ကျွမ်းကျင်သူများအမှုဆောင်အရာရှိရှာကြံ အဘယ်သူသည်ဆော်ဒီအာရေဗျအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ရှာကြ၏။ သင်သည်သူတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာမှသွယ်ဝိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အယ်လ် Baik စာဆိုင်များ & ဘား
ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့သူတို့မြို့မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအစားအစာဝတ်ပြုကြလော့။ ALBAIK ကုမ္ပဏီအားဖြင့်သင်တို့ကိုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုစစ်ဆင်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များအစားအစာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တန်ဖိုးအထားဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည်။
ဒီအကြောင်းပြချက်အယ်လ် Baik စာဆိုင်များ & ဘားသည်။ ဒါဟာဆော်ဒီအလုပ်သမားတွေအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းအဘို့မသာတဲ့ကော်ပိုရိတ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းမှကျူးလွန်နေသည် အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်လေးစားမှုရှိသူများခွအေနမြေားယဉ်ကျေးမှုအောက်မှာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားရန်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူအမျိုးမျိုးအတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ကူညီပေးခြင်း။
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်အကြီးတန်းအဆင့်အထိအလုပ်အမှုဆောင်မှအငယ်တန်းအနေအထားကနေရာထူးတိုးနိုင်ပါတယ်စိတ်ထဲ၌ဤအတူစကားပြော။ ရေရှည်မှာခုနှစ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏တစ်နှစ်အတွင်းမြှင့်တင်ရေးအရတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းအဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအကူအညီပေး။ အဖြစ်သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူရနိုင်သမျှသောထောက်ခံမှုနှင့်အတူမှတ်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နှင့် ရတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ ဖွံ့ဖြိုးနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်၏နိုင်ငံတော်ကိုကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြီးထွားရန်။ ဒါကြောင့်အယ်လ် Baik စာဆိုင်များ & အရက်ဆိုင်နှင့်အတူပညာရှင်ပီသစွာအလုပ်လုပ်အနှစ်ချုပ်ရန် ညျ့အဝအလားအလာအောင်မြင်ရန်ရန်သင့်အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်.
အယ်လ် Baik စားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူဆော်ဒီအာရေဗျဂျော့ဘ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျအယ်လ် Bilad ဘဏ်
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအခြားနည်းလမ်းအတူ။ သငျသညျမှာကြည့်သင့်ပါတယ် ဘဏ် Albilad တစ်ဦးဆော်ဒီအာရေဗျဖြစ်ပါတယ်။ ဤဘဏ်ပူးတွဲစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်အကြောင်း, သတင်းအချက်အလက်နဲ့စတင်ရန်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အယ်လ် Bilad ဘဏ် 5,000,000,000 ဆော်ဒီ Riyals တစ်ကော်ပိုရိတ်မြို့တော်နှင့်အတူ vide တော်ဝင်အမိန့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သောကြောင့် အလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်စေသည်.
တစ်ဦးဘဏ်လုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ဘဏ် Albilad အားလုံးဆော်ဒီအာရေဗျကျော်တိုးချဲ့ဖို့ရှာတတ်၏။ ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်အသစ်သောမြို့ကြီးများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအတွက်အခက်များဖွင့်လှစ်။ အမြိုးသမီးမြားရဲ့အကိုင်းအခက်များနှင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုစင်တာများပေးဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီအတွက်ဒေသခံလုပ်သားများအပြင်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ။ ဒါကြောင့်မည်သူမဆိုမိမိတို့၏န်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤအချက်များအားဘဏ် Albilad သစ်ကို client များအတွက်န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးအဆင့်ဆင့်နှင့် segments များပေါ်မှာရှိသမျှဘဏ်လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးနိုင်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အဲဒီအချိန်တုန်းက သငျသညျအများအပြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုမြျှောလငျ့နိုငျ။ အတူစတင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘဏ္ဍာရေးထုတ်ကုန်များတွင်အလုပ်အကိုင် နှင့်လက်လီဘဏ်လုပ်ငန်းထုတ်ကုန်အတွက်အစာရှောင်ခြင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ အတူတူဆော်ဒီအာရေဗျရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထုတ်ကုန်အလုပ်အကိုင်များအတူ။
အယ်လ် Bilad ဘဏ်နှင့်အတူဆော်ဒီအာရေဗျဂျော့ဘ်။
အယ်လ် Faisaliah Group မှ
အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာများ၏အယ်လ် Faisaliah Group မှတဦးတည်း။ ဆော်ဒီကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပုဂ္ဂလိက-ကျင်းပခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ရည်ရွယ်ချက်, ကြီးထွားမှုကုမ္ပဏီကို multi-စီးပွားရေးအုပ်စုဖြစ်လာသည်။ ကွဲပြားခြားနားကြောင့်ထားရန်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်ရုံးချုပ်ကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာရေဗျ၌တည်ရှိ၏နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း်ထမ်းဆောင်။ သငျသညျဆော်ဒီအာရေဗျအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားသည့်အခါမှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ ယေဘုယျအားဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီ 1971 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့။
အပြုသဘောဘက်တွင်, အယ်လ် Faisaliah Group မှ စိုက်ပျိုးရေး & စားနပ်ရိက္ခာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူအတွင်းဦးဆောင်ရာထူးစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမကြာခဏအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအီလက်ထရောနစ် & စနစ်များစျေးကွက်ကြီးထွားလာ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ GCC ဒေသအနှံ့အသိအမှတ်ပြု.
ရေရှည်မှာမှာ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကဖြစ်ပါတယ်။ ရန်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင် စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်နှင့်အတူသင်တစ်ဦးလက်ကိုပေးပါ။ နှင့်ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်အတူ၎င်း၏ရှည်လျားသော-သက်တမ်းမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ကျိန်းသေသငျသညျ Riyadh အတွက်ဂျော့ရမှကူညီပေးပါမည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်တစ်ဦးကုမ္ပဏီဆိုနီ, Danone, Philips ကများနှင့် Accenture အပါအဝငျ။
အယ်လ် Faisaliah Group နဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျဂျော့ဘ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်း Riyadh Daily သတင်းစာ
ချိန်ခွင်လျှာတွင်, သတင်းစာအတွက်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားပါ။ မီဒီယာတစ်ဦးကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထိပ်တန်းထစ်ဖြစ်လာ ဆော်ဒီအမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်။ Riyadh Daily သတင်းစာ Al-Yamamah စာနယ်ဇင်းတည်ထောင်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤအချက်များကုမ္ပဏီပေးထားနေ့စဉ်ဆော်ဒီမြို့တော်ကနေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပထမဦးဆုံးအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ကြသည်။
နောက်ဆုံးတွင် သငျသညျမီဒီယာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေလျှင်။ ၎င်း၏အစ်မထုတ်ဝေမီဒီယာ Al-Riyadh Arabic အဘိဓါန်သတင်းစာမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း add ပေးပါ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, Riyadh Daily သတင်းစာကနိုငျငံတျောရဲ့မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်။
Riyadh Daily သည် 1960s တွင်သတင်းစာစောင်မထုတ်ဝေမီသမိုင်းကုမ္ပဏီတွင်ပထမဆုံးအကြိမ် 1985s တွင်သတင်းလွှာထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သငျသညျလညျးရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ အဘယ်သူသည်များမှာ ဒီကုမ္ပဏီအတွက်စုဆောင်း.
Riyadh Daily သတင်းစာနှင့်အတူဆော်ဒီအာရေဗျဂျော့ဘ်။
Buraidah, အများ၏တဦးတည်းအတွက်စားသောက်ဆိုင် နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များ။ 1989 ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 28 တည်ထောင်ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းစားသောက်ဆိုင်နှင့်အတူ, အဖြစ်မှန်ပါ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သင်သည်ဤကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူအလုပ်ရရန်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ များသော ဒီကုမ္ပဏီအတွင်းပိုင်းစီးပွားဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေရာလွတ်.
သငျသညျစကားပြောယေဘုယျအားကျွမ်းကျင်သူများနေတယ်ဆိုရင် ယဉ်ကျေးမှုအဖြစ်တည်မှု အကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှလမ်း။ foreground ကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစိတ်ကူးများခုနှစ်တွင် GCC နိုင်ငံများတွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူစတင်သင်သည်သင်၏ CV ကိုပေးပို့သင့်ပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုရ။ GCC ၌ဤကုမ္ပဏီရန်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် Upload လုပ်ပါ။
ကနေအများအပြားရာထူးများအတွက် CV ကိုလက်ခံတစ်ခုအယ်လ် Tazaj စားသောက်ဆိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ နောက်ခံအဓိကအားအလုပ်အကိုင်များအရောင်းနှင့်ကောင်တာရာထူးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ CV ကိုပေးပို့ သငျသညျအငယ်တန်းနှင့်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးစိတ်ဝင်စားလျှင်။
တစ်ခုကအယ်လ် Tazaj နှင့်အတူဆော်ဒီအာရေဗျဂျော့ဘ်။
တစ်ဦးဆော်ဒီပူးတွဲစတော့ရှယ်ယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်သိရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအချက်များပေးထား ဧရာရေနံကုမ္ပဏီနှင့်အတူသစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလာပြီ ရေတွင်းတစ်တွင်း-paid အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆော်ဒီအာရေဗျ၌တည်ရှိ၏။ လက်လီန်ဆောင်မှုအပြေးပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကုမ္ပဏီမှတက်နဲ့ multi-ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုဖြစ်လာ အဆိုပါ GCC ဒေသအတွင်းအဖွဲ့အစည်းအ.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာရေဗျအရည်အသွေးကိုန်ဆောင်မှုများပေးအပေါ်သူ့ဟာသူ prides ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီအဖွဲ့အစည်းကအိမ်ရှင်၏အနှစ်တစ်လျှောက်တွင်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများစီမံကိန်းများကိုထုတ်ပေး အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း.
ဤအတူ, စိတ်တွင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီတခုအတွင်းတည်ငြိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဆော်ဒီအာရေဗျဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းကျော်သာယာဝပြောတဲ့အမှုဆောင်အရာရှိယနေ့အထိဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူအောင်မြင်မှု။ ဒါကကုမ္ပဏီလည်း Philipino အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုစုဆောင်း။ ဒါကြောင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သူတို့ငှားရမ်းအပိုင်းသွားရောက်တကယ်ကျိုးနပ်သည်။
အဆိုပါအယ်လ် Muhaidib Group မှ
ကုမ္ပဏီ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီများနိုင်ငံတကာပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်ကုမ္ပဏီ 1943 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ယခုတိုငျအောငျဒူလ် Kadir အယ်လ် Muhaidib တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အလုပ်လုပ်မှကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ Sulaiman အေအယ်လ် Muhaidib ဖြစ်ပါတယ်။
ကလက္ကားအဆောက်အဦးပစ္စည်းများရောင်းသောကုမ္ပဏီ၏အဓိကအကျိုးစီးပွားမှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ကုမ္ပဏီအထူးဆော်ဒီအာရေဗျဆန်စျေးကွက်နှင့်ဖြန့်ဖြူးအစားအသောက်ထုတ်ကုန်တွေတင်သွင်း။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီဆော်ဒီအာရေးဗီးယားကဏ္ဍတွေအတွက်အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံအဘို့အုပ်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်းကုမ္ပဏီ GCC အတွက်၎င်း၏စုဆောင်းမှုကဏ္ဍကိုတိုးချဲ့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်အစုစုကိုကုမ္ပဏီကတခြားအစေ့ပါဝင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်, ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျ၏နိုင်ငံတော်၌တစ်ဦးလက်လီထွက်ပေါက်ကွင်းဆက်များတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာ Stores (နောက်ပိုင်း Panda နှင့်အတူပေါင်းစည်း) ၏ဘာမျှမပြောပါရန်။
ယနေ့အထိတူညီတဲ့လက္ခဏာသက်သေအသုံးပြုပုံအုပ်စုငါးခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍများ၌တက်ကြွစွာဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွက်: စားနပ်ရိက္ခာ, အိမ်ခြံမြေ, အဆောက်အအုံပစ္စည်းများ, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အသုံးအဆောင်များ & အခြေခံအဆောက်အအုံ။
အယ်လ် Muhaidib Group နဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျဂျော့ဘ်။
အာရပ်အမျိုးသားဘဏ် (ANB) နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ သူတို့အခွအေနမြေားအောက်မှာကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာရေဗျငှားရမ်း, Riyadh အခြေစိုက်အဓိကဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကုမ္ပဏီဆော်ဒီစတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့ကယ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ သို့သော်သင်သည်တတ်နိုင် အနည်းငယ်တခြားနေရာတွေမှာနေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့အလုပ် post ကိုရှာတွေ့.
ANB Group မှပြည့်စုံကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သင်ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်အတူအလုပ်ရနိုင်သည်။ သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူသစ်တစ်ခုအလုပ်စတင်နိုင်သည့်အခါခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဆင်ခြင်၏။ အခြိနျမှနျမှ ကုမ္ပဏီစုဆောင်းရေး ရောင်းအားအမှုဆောင်အရာရှိသည်။ အာရပ်အမျိုးသားဘဏ်တစ်ခုကိုဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်း 156 အခက်များရှိပါတယ်။ ၎င်း၏အကြီးဆုံးရှယ်ယာရှင်ရန်ပုံငွေ၏ 40% ကိုင်ပြီး, အာရပ်ဘဏ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီများ၏ Balubaid အဖွဲ့ (BGC)
Balubaid န်ထမ်း လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူ။ BGC ၏နိုင်ငံစုံလုပ်သားအင်အားကျော်ရှိပါတယ် 1,700 အရှေ့အလယ်ပိုင်းန်ထမ်း။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ကုမ္ပဏီ 1952 ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 65 အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကရေရှည်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေလျှင်။ ဤ ကုမ္ပဏီအများအပြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍများအတွက်အသုံးပြုမှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
ခပ်သိမ်းသောအမူအရာအားဖြင့်, ကုမ္ပဏီများ၏ Balubaid Group မှအိမ်ထဲဆက်လက်လေ့ကျင့်ရေးမှကျူးလွန်နေသည်။ Correspondingly ပြည်တော်ပြန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ဤစကားမှန်ပေမည်ဖြစ်သော်လည်းနှင့်၎င်း၏အဖှဲ့အစညျး၏ Saudization သူတို့ကိုလစဉ်လတိုင်းအသစ်ကန်ထမ်းများငှားရမ်းစေသည်။
အဆိုပါ Group ၏ လတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရကျောင်းသားများနှင့်မန်နေဂျာများငှားရမ်း။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ 40 နိုင်ငံများတွင်ကျော် မှစ. , အာဖရိက, တောင်အာရှအရှေ့တောင်အာရှ, မြောက်အမေရိကနှင့်သင်တန်း၏, ဆော်ဒီအာရေဗျ၏နိုငျငံတျော။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်း bin Quraya
သို့သော်ငြားလည်း, သင်သည်တာရှည်အသုံးအနှုန်းများနေရာလွတ်ကိုရှာဖွေနေပါသည်လျှင်။ တစ်ဦး Bin ကို Quraya Group မှကြည့်ရှိသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုဆော်ဒီပုဂ္ဂလိကပိုင်-ကျင်းပကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ BQ ငှားရမ်းခြင်းနှင့်အတူန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲကုမ္ပဏီ။ ထိုသို့ဆော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုအတွက်၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာရေဗျအတွက်ဦးဆောင်မိုးသည်းထန်စွာပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံး Bin ကို Quraya အထက်တွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၏အကြီးဆုံးမိုးသည်းထန်စွာပစ္စည်းကိရိယာများစင်းကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရုံးချုပ်ဆော်ဒီအာရေဗျ Dhahran အတွက်အခြေခံသည်။ ကုမ္ပဏီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ နိုငျငံတျောကျော်အားလုံးအသစ်စီမံကိန်းများအတွင်းငှားရမ်းကုမ္ပဏီ။ သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအုပျစု link ကို။ အဆိုပါစုဆောင်းမှုအကြံပေးပို့စ်တင်နေကြအလုပ်အကိုင်အခြို့ရှိတက်ကမ်းလှမ်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်, သင်သည်ဤကုမ္ပဏီမြင့်မားကြောင်းသတိရရမယ် Google ကအသိအမှတ်ပြု။ အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့။ လူတွေနေတဲ့အလုပ်ရှာတှေ့နိုငျရှိရာအခြားနိုင်ငံများမှလည်းရှိပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရတဲ့နယူးကျွမ်းကျင်သူများလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာသင့်ပါတယ် သငျသညျ abroa ရွှေ့မတိုင်မီနှစ်ကြိမ်စဉ်းစားဃ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျကြှနျုပျတို့၏အပေါ်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုဂျော့ဘ်အုပ်စု။ အလွန်စမတ်လမ်းသငျသညျကိုပင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှရွှေ့မတိုင်မီနေရာလွတ်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။
စော်ဘွားများနှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျ၌ထားခံရဖို့စူပါလူကြိုက်များနည်းလမ်းများ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အဖို့ဖြစ်ပါတယ် သင့်မိုဘိုင်း tools တွေကိုငှားရမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများအလုပ်ရှာဖွေရန်လုံလောက်သောအချိန်မရှိကြပါဘူး။ အောက်ပါနှစ်များတွင်သစ်ကိုနေရာလွတ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှတလျှောက်လာကြလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်အဘို့, အလွန်လူကြိုက်များဦးတည်ရာ စုဆောင်းမှုဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကဆော်ဒီအာရေဗျဂျော့ဘ်များအတွက်သာအများအပြားနိုင်ငံများတွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းဂျော့ - သူကချစ်ယနေ့အလုပ်အကိုင်ဖမ်းပြီး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအစအားလုံးပင်လယ်ကွေ့ကျော်ကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဘို့ကိုတင်ပြ Careerjet စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီတခု နှင့် ယူအေအီးအတွက် Monster အလုပ်ရှာဖွေအင်ဂျင်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းဂျော့ဘ်များအတွက်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ!
သင်ကရှာတွေ့စေချင်ပါနဲ့ ဆော်ဒီအာရေဗျဂျော့? ဤစကားမှန်ပေမည်ဖြစ်သော်လည်း ကျနော်တို့ကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ! - Riyadh အတွက်ဂျော့ဘ်